9 Amaqiniso Ahehayo Futhi Angaziwa Nge-Teacup Maltese - Izinhlobo
9 Amaqiniso Ahehayo Futhi Angaziwa Nge-Teacup Maltese
ITeacup Maltese iyilokho okushiwo yigama - inja encane impela yaseMalta ... 4lb ukucacisa!
Lezi zinjana ezincane zisheshe zaduma eminyakeni engu-20 edlule. Akunzima ukubona ukuthi kungani:
TO inja emhlophe ecwebezelayo ,
Baziwa ngemvelo yabo yothando nobuntu obunobungane,
Imile cishe ngamasentimitha amane ubude,
Ukupakisha ubuntu obuningi emizimbeni yabo emincane.
Kepha, yini okufanele uyazi ngalolu hlobo lwenja yokufundisa?
Nawa amaqiniso ayisishiyagalolunye ajabulisayo, athakazelisayo futhi amancane awaziwayo wokuqhakambisa intshisekelo yakho enjeni yeTeacup Maltese.
1. ITeacup Maltese Ikala 4lb Nje
2. U-Aristotle Ubhale Ngezihlobo Zenja YaseMalta
3. Ye Dogge yasendulo yaseMalta
4. ITeacup Maltese Is A Royal
5. ITeacup Maltese Inobuntu obukhulu
6. Okumhlophe Okuwukuphela Kombala Wokufundisa Nge-Teacup Maltese
7. I-Teacup Maltese Ingabiza u- $ 2,000 USD
8. Abakwazi Ukunyuka Izitebhisi
9. Izinja Zokufundisa ZaseMalta Zithambekele E-Hypoglycaemia
Le nja ingumbhalo omncane nje wesiMalta esivele sincane.
I-American Kennel Club ayiyiboni le ndlela yokufundisa njengohlobo lwayo uqobo, ihlukaniswa ngokusemthethweni njengenja encane yaseMalta.
Ngenxa yalokhu, ungathola ukuthi iTeacup Maltese yakho ibhaliswe njengenja yaseMalta neKennel Club. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi i-pooch yakho esesilinganisweni sokufundela kungenzeka ingabhaliswa nhlobo ngenxa yokuthi incane kakhulu ngezinga lokuzala .
Lezi zinja ezincane zinesisindo esingu-4lb nje kuphela - uma kuqhathaniswa nezingane zakwabo ezijwayelekile ezinesisindo esingu-8lb.
Ukuhluka kweTeacup kwale nja empeleni kwaqala ukubonwa ngekhulu le-17 nele-18, lapho abalimi bezama ukwenza lokhu inja encane ngisho encane .
Lokhu kwenziwe ngu ukuwela ama-Poodle Ama-Miniature nabaseSpain kulayini.
Eqinisweni, ngesinye isikhathi bekucatshangwa ukuthi kunezinhlobo zezinja ezihlukene eziyisishiyagalombili ezikhonjwe njengeMalta.
Kodwa-ke, ngokuhamba kwesikhathi, isilinganiso sohlobo senziwa futhi saqedwa ngo-1964 futhi asikaze sishintshe kusukela lapho.
Umsuka Wenja YaseMalta
I ngqo umsuka wenja yaseMalta kukodwa akwaziwa.
Kucatshangwa ukuthi kuvela ezinjeni zohlobo lweSwitzerland Spitz, noma a isihlobo seTibetan Terrier .
Esikhathini esedlule, iMalta ibibhekwa njenge- ilungu lomndeni wakwaBichon , kodwa, lokhu akulungile njengoba izinhlobo ezimbili zohlobo lwehlukene ngokuhlukile.
Zivela eMalta ekuqaleni, lezi zinja zazithandwa kakhulu emiphakathini yasendulo yamaGrikhi. Isazi sefilosofi esingumGreki u-Aristotle ungomunye wabantu bokuqala ukukhuluma ngo 'Melitaei Catelli', isihlobo sokuqala senja yaseTeacup Maltese.
Lokhu kwakusekuqaleni kuka-370 BC.
Izimbongi zaseRoma zabhala 'ngenja encane emhlophe', ekhonjwe izazi-mlando ezithile njengenja yokuqala yaseMalta.
Eminyakeni eyishumi edlule, iTeacup Maltese yaziwa ngamagama amaningi ahlukene - hhayi nje uRover noma uFido.
Kusukela lolu hlobo lwaqala ukutholakala eMalta, baziwa ngamagama amaningi. Lokhu kufaka, kepha, akukhawulelwe ku:
Yeyi Inja yasendulo yaseMalta
Inja Yezintokazi ZaseRoma
Inja Yengonyama yaseMalta
Lolu hlu olude lwamagama luvela emlandweni wabo omude njengezilwane ezihambisanayo .
Njengoba ukwazi ukubona ohlwini lawa magama onke anento eyodwa afana ngayo; inja yaseMalta uhlobo oluthandwa kakhulu, olwaziwa ngobudlelwano balo, imfudumalo kanye nemvelo enobungani ngokuvamile.
AbaseMalta babonwe emathangeni eRoyal Englishty, bobabili uMary Queen weScots kanye neNdlovukazi u-Elizabeth I kokuba neyakho .
Ngenxa yamafa abo ezigodlweni zobukhosi, abaseMalta bakhuliswe bedla okuhle kakhulu futhi ngenxa yalokho bangabadli abathanda kakhulu.
Zidinga ukudla okulinganiselwa ku-20% wamaprotheni. Kodwa-ke, ikhwalithi ibaluleke kakhulu kunekhwalithi, ngakho-ke kungcono njalo ukondla imithombo emincane yekhwalithi ephezulu kunamaprotheni amaningi asezingeni eliphansi.
Amafutha namafutha kufanele kube cishe u-5% -10% ukusiza ukugcina ijazi lenja yakho licwebezela.
Ngenxa yokuthambekela kwabo ngase ukuthuthukisa ushukela wegazi ophansi , kubalulekile ukuthi lezi zinja zondliwe kancane futhi kaningi.
Ngezikhathi eziningi kunalokho, bazokhetha ikhwalithi ephezulu, ukudla kwamahhala okusanhlamvu.
Lezi zinja ezifundisela hlala udlala futhi ube nomfutho isikhathi eside ngemuva kokuba yimidlwane.
Le nja ijabula kakhulu lapho idlala nabangane bayo abangabantu, futhi iyathanda ukuba phakathi kwabantu abasha.
Lokhu kungenzeka ukuthi kuvela imvelaphi yabo njengenja yethanga , imvelo yabo enakekelayo iza njengengxenye yephakeji.
Bathanda ukugoqana embhedeni nabangane babo abangabantu. Eqinisweni, ngokungafani nezinye izinja ezincane mancane amathuba okuthi bahlakulele lezo zimilo ezi-yappy nezishubile ovame ukuzibona kwezinye izinja ezincane.
Kodwa-ke, usayizi wabo omncane usho ukuthi bangaba nokwesaba lapho behlangana nezinja ezintsha, ikakhulukazi endaweni abangajwayelene nayo.
Izethulo kubantu abasha, izindawo nezinto kufanele zenziwe ngejubane lenja yakho uqobo , futhi ezimweni eziningi iTeacup Maltese izothatha izinto ngokuhamba kwesikhathi.
Isimo sabo sengqondo sikwenza kube lula kakhulu ukuqeqesha kanti ukuma kwabo ngabantu kubenza babe abafundi abasheshayo.
Ngeshwa, izinja zetiacup zidume kabi Kunzima ukugqekeza ngenxa yezinsimbi zabo ezincane. Lokhu kungalungiswa ngokuqiniswa okuningi okuhle nokubekezela.
ITeacup Maltese iyinja encane emhlophe ethandekayo.
Imvamisa ime cishe ngamasentimitha angu-8 ubude, futhi ngokwesilinganiso iba nesisindo esingu-4 noma 5 lb. Abesilisa nabesifazane abehlukene ngobukhulu nangesisindo.
Ngokusho ezingeni lokuzalisa , umhlophe ukuphela kombala owamukelekayo wale nja. Yonke eminye imibala (kufaka phakathi izinja ezinemibala emibili nezimbili) ibhekwe njengengamukeleki kusukela ngo-1913.
Kubonakala kalula ngobuso babo obuyindilinga, amakhala amnyama namehlo amnyama - amehlo uqobo lwawo kuvame ukuthiwa ahlakaniphile. Amakhala abo amnyama angaphenduka abomvana uma bengatholi ukukhanya kwelanga okwanele, noma uma beyinondindwa eza ngenkathi.
Le nja nayo ibhekwa njenge-hypoallergenic ngakho-ke yenza ukhetho oluhle kakhulu kulabo abanenkinga yokungezwani komzimba.
Ukulungisa Inja YaseMalta
Esikhathini esiningi, le nja yokudlala izongenelwa kulokho okuyikho eyaziwa ngokuthi 'ukusika umdlwane' , lapho ijazi lifushane - lingaphansi kwe-intshi ubude.
Lolu hlobo lwejazi ludinga ukunakekelwa okuncane kakhulu, ngaphandle kokuxubha masonto onke noma kunjalo.
Uma ishiywe isikhathi eside, ijazi lidinga ukunakekelwa okuningi ukuyiyeka ingangeni. Ukuxubha kuzodingeka nsuku zonke, futhi ukugeza kuzodingeka masonto onke ukususa izisihla ebusweni babo.
Ukuze uzalise le nja, kufanele uzalise ndawonye izinja ezimbili ezincane kakhulu zaseMalta.
Izinja ezijwayelekile zaseMalta zingazala imidlwane emithathu kuphela ngokuphepha, ngakho-ke ezimweni eziningi kuzokhiqizwa imidlwane eyodwa noma emibili kudoti ngamunye.
Kodwa-ke, ngisho nomdlwane owodwa ubeka ubunzima obukhulu kunina, futhi isikhathi esiningi lezi zinja kufanele zenze njalo ubelethe ngokuhlinzwa .
Leli zinga lokucindezeleka emzimbeni kamama lisho ukuthi ukunakekelwa kwezempilo okuhle kubaluleke kakhulu.
Lezi zinyathelo zokuqapha ezengeziwe zisho ukuthi imidlwane yeTeacup Maltese ibiza phakathi kuka- $ 750 kuya ku- $ 2,000 USD.
Ithegi lentengo ebizayo, nokuthandwa kwabo, kwenza lolu hlobo lube intandokazi “yabafuyi abasemuva” kanye nezigayo zemidlwane. Lezi zinhlobo zabantu zivame ukunakekela kakhulu ngokwenza imali esheshayo kunenhlalakahle yezinja zabo.
Ukugwema lezi zinhlobo zabafuyi kulula uma wazi ukuthi yini okufanele uyibheke:
Umfuyi omuhle akazikhangisi izinja zakhe ezindaweni ezifana neCraigsList noma iGumTree
Umfuyi onekhono uzokwenza konke ukuhlola okudingekayo kwezempilo enkomeni nasedamini ngaphambi kokuzala
Umfuyi omuhle uzokuthokozela kakhulu ukubona umdlwane wakho kaningi nomama wakhe
Ngenxa yokuzalaniswa kwe-stud, kungahle kungenzeki ngaso sonke isikhathi ukubona ubaba, kepha umfuyi omuhle uzokuthokozela ukukunikeza imininingwane ngempilo yakhe nobumnene bakhe
Usayizi omncane wale nja uyenza ibe ntekenteke ngendlela eyisimanga.
Umdlandla wabo wokuba seceleni kwakho uyathathelwana, kepha, ukunakekelwa okukhulu kufanele kuthathwe sengathi uma bengena ngaphansi kwezinyawo zakho kulula kakhulu ukubaphuthelwa nokuthi kwenzeke ingozi.
Ngaphezulu kwalokhu, izitebhisi zingaba yinselelo enkulu yenja encane kanye nengozi enkulu kakhulu elindele ukwenzeka.
Ngenxa yalokho, lezi zinja zivame ukubonakala ezindlini ezigcwele phansi, njengefulethi noma i-bungalow.
Njengokudlalayo futhi zithanda lezi zinja , kubalulekile ukuthi konke ukudlala kuzungeze izingane ezincane kugadwe.
Yize ukubuka lezi zinja ezincane zihlangana nezingane ezincane kuhle kakhulu, izingane futhi kungaba nokuxokozela futhi lezi zinja zincane kakhulu akuthathi lukhulu ukuphuka.
Ngakho-ke kubalulekile ukuthi lezi zinja ziphathwe ngokunakekelwa, ngakho-ke uma ukuxhumana nengane kubalulekile, kubalulekile futhi ukufundisa ingane ukudlala nenja.
Lezi zinja ezincane zinamandla okuthuthukisa izinkinga eziningana zezempilo.
Okuvame kakhulu yi-hypoglycaemia (i.e. ushukela wegazi ophansi ) - lokhu kungadala ukuquleka ngisho nokufa uma kungabhekwa ngokucophelela.
Ukusiza ukuphatha lesi simo, inja yokufundisa kufanele idle kathathu noma kane ngosuku ukusiza ukugcina amazinga kashukela egazini.
Inja yaseMalta yaziwa futhi ngezinkinga zabo zamazinyo.
Abanikazi kufanele bakulungele ukuxubha njalo amazinyo abo, basebenzise ukuhlafuna kwamazinyo, futhi bavakashele njalo udokotela wamazinyo wezinja.
Izinja zaseMalta nazo zijwayele ukuba nezinkinga zesibindi, zenhliziyo nezokuphefumula ngenxa yosayizi wayo omncane womklami .
Abangaba ngabanikazi bale nja kufanele balungele ukuthola izikweletu eziphakeme kunalezo ezijwayelekile, futhi kuyinto okufanele uyicabangele lapho ufuna ukuthenga enye yalezi zinambuzane.
Ngokwesilinganiso iTeacup Maltese iphila phakathi kweminyaka eyi-12 nengu-15.
Njengoba ukwazi ukubona, iTeacup Maltese ingaphezu nje kokuba yiphuphu elihle esikhwameni noma esitsheni setiye.
Lezi zinja zasendulo zikubonile ukunyuka nokuwa kwempucuko futhi zibe nabanikazi abaningi abadumile ngaphambi kokuwela ethangeni lakho.
Yize bedume ngokuxokozela, bayi- isilwane esinothando nesiqotho .
Badinga izidlo ezisezingeni eliphakeme, bedla okuhle kuphela futhi badinga inqubo yokuzilungisa ephapheme ukugcina ijazi labo elihle.
Noma ngabe ungumnikazi wale pooch encane, ubheke ukuyithola, noma udlula nje kuyo, zizwe ukhululekile ukusishiya namazwana asitshela imicabango yakho ngalenja encane enhle.
Ingabe Izinja Zingayidla I-Broccoli? Ingabe Kuphephile Kubo?
Ingabe i-English Cocker Spaniel ingumngane omuhle?
inhlanganisela ye-chihuahua jack russell enezinwele ezinde
king charles spaniel kanye bichon mix
umhlanganisi wempisi omnyama waseJalimane omnyama
Amagama emidlwane yabesifazane ephuzi